तपाईको जापानको यात्राको तयारीको बखत सिफारिश उपयोगी साइटहरू - Best of Japan
यस पृष्ठमा, म जापानसँग सम्बन्धित विभिन्न वेबसाइटहरू परिचय दिनेछु। म समय समयमा यो जानकारी अपडेट गर्ने छु। यो तपाइँको जानकारी एकत्रीत गर्न को लागी एक उपयोगी संसाधन हुन सक्छ। होटल, यातायात, रेस्टुरेन्ट, र स्थानीय सम्बन्धित वेबसाइटहरू कोटिहरू द्वारा विस्तारमा संक्षेप गरिएका छन्। यस पृष्ठको तल लिंकहरू भएकाले कृपया त्यहाँबाट तपाईं हेर्न चाहानु भएको पृष्ठमा जानुहोस्।
जापानको बारेमा व्यापक रूपमा सिकाउने साइटहरू
कोटी द्वारा जापानी सम्बन्धित साइटहरू
जापान राष्ट्रिय पर्यटन संगठन
जापान राष्ट्रिय पर्यटन संगठन (JNTO) जापानी सरकारको एक पर्यटन सम्बन्धित विन्डो हो। JNTO को आधिकारिक वेबसाइट जापान को लागी दर्शनीय जानकारी को एक बहुत समावेश गर्दछ। यो जानकारी १ 15 भाषाहरुमा छ। यदि जापानमा ठूला प्रकोपहरू छन् भने, यो आधिकारिक वेबसाइटले विदेशी पर्यटकहरूको लागि आवश्यक जानकारी प्रदान गर्दछ।
>> JNTO को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
जापान- guide.com एक प्रसिद्ध वेबसाइट हो जुन जापानमा बसोबास गर्ने विदेशीहरूले चलाउँछन्। वेबसाइट निर्माण भएदेखि यसले बिस्तारै यसको लेखहरूको संख्या बढेको छ। यो जापान आउने पर्यटकहरु बीच सबैभन्दा परिचित पर्यटक सूचना साइट हो भनेर भन्न सकिन्छ। वसन्त Inतुमा, यसले जापानमा चेरी फूलहरूको खिलको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ।
>> जापान- guide.com को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
ZEKKEI जापान टुरिस्ट इन्फर्मेसन वेबसाइट हो जुन कम्पनी द्वारा Ginza मा हेड अफिसको साथ संचालित हो।
टोकियो। यसले लेखहरू प्रदान गर्दछ जुन सुन्दर छविहरू प्रयोग गर्दछ जापानी सुन्दरताका लागि विदेशमा मानिसहरूलाई। "ZEKKEI" को अर्थ जापानीमा "उच्च सुन्दर परिदृश्य" हो। यसको नामको अर्थ जस्तै, यो एक धेरै सुन्दर साइट हो।
>> ZEKKEI जापानको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
यहाँ सबै कोटीका लागि तपाईका लागि उपयोगी वेबसाइटहरू छन्। यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने, कृपया तलको लिंक को लागी अनुसरण गर्नुहोस् जुन तपाईलाई रूचि छ।
होटल, यातायात, रेस्टुरेन्ट सम्बन्धित साइटहरू
जब तपाईं जापानमा कुन होटल बस्नुपर्नेछ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने, म सिफारिश गर्दछु कि तपाईं तल "TripAdvisor" प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाइँ कुन होटल बस्न चाहानुहुन्छ भन्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, "सस्तो आरक्षण" को सट्टा "सस्तो आरक्षण साइट" खोजौं। मैले व्यक्तिगत सिफारिश गरिएको आरक्षण साइटहरू पनि सूचीबद्ध गरें। वास्तवमा, मैले निम्न लेखहरूमा यी साइटहरू परिचय गर्‍यो। त्यसैले विवरणको लागि तलको लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। यस पृष्ठमा नक्कलबाट बच्न, म केवल डाटा गणना गर्दछु। सामग्रीको तालिका कम्पायरेसन साइटहरू होटेल रिजर्भेसन साइटहरू तुलना साइटहरू TripAdvisor TripAdvisor TripAdvisor धेरै उपयोगी छ जब तपाईं जापानमा होटल पाउनुहुन्छ। माथिको छविमा क्लिक गर्नुहोस्, TripAdvisor को आधिकारिक वेबसाइट एक अलग पृष्ठ मा प्रदर्शित हुनेछ। ट्राभेलको ट्राभेलको ट्राभेलको जापानमा धेरै होटल आरक्षण साइटहरू बीचको सस्तो आवास योजना भेट्टाउने छ। माथिको छविमा क्लिक गर्नुहोस्, ट्राभेलकोको आधिकारिक वेबसाइट एक अलग पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ। होटल आरक्षण साइटहरू Rakuten यात्रा Rakuten यात्रा Rakuten यात्रा र निम्न Jalan.net सबै भन्दा जापानी होटेल कभर। माथिको छविमा क्लिक गर्नुहोस्, Rakuten यात्रा को आधिकारिक वेबसाइट एक अलग पृष्ठ मा प्रदर्शित हुनेछ। Jalan.net jalan.net Jalan.net राकुटेन ट्राभलको सब भन्दा बलियो प्रतिद्वन्द्वी हो। माथिको छविमा क्लिक गर्नुहोस्, Jalan.net को आधिकारिक वेबसाइट एक अलग पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ। जापानिकान जापानिकान जापानिकान जापानको सबैभन्दा ठूलो ट्राभल एजेन्सी जेटीबी द्वारा संचालित एक वेबसाइट हो। माथिको छविमा क्लिक गर्नुहोस्, जापानिको आधिकारिक वेबसाइट एक अलग पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ। म तपाईंलाई अन्त मा पढ्न कदर गर्छु। पछाडि ...
यस पृष्ठमा, म रेस्टुराँ सम्बन्धित साइट सहित धेरै विधाको साइटहरू परिचय गर्दछु। तलको लिंक उपयोगी छ जब तपाईं जापानी चाडहरू र आकर्षणहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, जब तपाईं जापानी समाचार र मौसम पूर्वानुमान जान्न चाहानुहुन्छ, र तपाईं जापानी उपसंस्कृतिमा रुचि राख्नुहुन्छ भने पनि। कृपया यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। सामग्री अनुसंधानकर्ता सम्बन्धित साइटमहत्वपूर्ण र आकर्षण जानकारी साइटवेदर पूर्वानुमान साइट मिडियासब्स्कल्चर जानकारी साइटलिंग पप संस्कृति जानकारी साइट रेस्टुरेन्ट सम्बन्धित साइट गुरूनावी गुरूनावी जापानको अग्रणी रेस्टुरेन्ट गाइड साइट हो। यसमा व्यक्तिगत रेष्टुरेन्टहरू र इजाकाया (जापानी शैलीको पब) आदि बारे विस्तृत जानकारी छ। >> GURUNAVI को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ HET PEPER HOT PEPER एक लोकप्रिय रेस्टुरेन्ट गाइड साइट माथिको GURUNAVI को साथ हो। यसमा व्यक्तिगत रेष्टुरेन्टहरू र इजाकाया (जापानी शैली पबहरू आदि) बारे विस्तृत जानकारी पनि छ। >> HOT PEPPER को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ favy favy पनि जापानी रेस्टुरेन्ट परिचय गर्ने साइट हो। यद्यपि यो माथिको गुरूनावी र हट पेपर जत्तिकै प्रमुख छैन, यो त्यस्तो साइट हो जसले विदेशी पर्यटकहरूलाई बुझ्न सजिलो बनाउँदछ। >> favy को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ शेट गेट जापानी खाना संस्कृति को बारे मा जान्न चाहनेहरु को लागी, म निम्न साइट सिफारिस गर्दछु। शन गेटले जापानको क्षेत्रमा स्वादिष्ट खानाको बारेमा प्रस्तुत गर्दैछ। यो साइट धेरै चाखलाग्दो छ। >> शन गेटको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ फेस्टिवल र आकर्षण जानकारी साइट छ जापान आकर्षण जापान आकर्षणहरु उत्सव र रोशनी जस्ता जापानी घटनाहरुमा अप-टु-डेट जानकारी प्रदान गर्दछ। जब तपाईं जानुहुन्छ ...
जापानी क्षेत्रीय विशेष साइटहरु
अर्को, म जापानमा स्थानीय दर्शनीय स्थलहरू पुर्‍याउने धेरै वेबसाइटहरू परिचय दिनेछु। म तिनीहरूलाई जापानको उत्तर तर्फबाट क्रममा परिचय दिनेछु। यदि तपाईं यी वेबसाइटहरू भ्रमण गर्नुहुन्छ, तपाईं जापानको प्रत्येक क्षेत्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि, अन्तमा, कृपया मेरो वेबसाइटमा फिर्ता आउनुहोस्! विषयवस्तु होक्काइडो सम्बन्धित वेबसाइट तोहोकु क्षेत्र सम्बन्धित वेबसाइट टोकियो मेट्रोपोलिटन (कन्तो क्षेत्र) सम्बन्धित वेबसाइट होक्काइडो सम्बन्धित वेबसाइट सप्पोरो टुरिस्ट एसोसिएशन सप्पोरो टुरिस्ट एसोसियसन सप्पोरोमा एउटा पर्यटन सम्बन्धित संगठन हो। यसले जापान र दुबै पर्यटकहरूका लागि सप्पोरोको दर्शनीय जानकारी प्रदान गर्दछ। >> सप्पोरो टुरिस्ट एसोसिएशनको आधिकारिक साइटको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् हकोडाट सिटी हकोडाट सिटीले तल र आधिकारिक वेबसाइटमा दुवै देश र विदेशमा पर्यटकहरूको लागि भ्रमण को जानकारी प्रदान गर्दैछ। >> हाकोडाट सिटी Biei टाउन Biei शहर को आधिकारिक वेबसाइट को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यसको सुन्दर फूल बगैंचा लागि प्रसिद्ध, आधिकारिक वेबसाइट मा पर्यटक जानकारी प्रदान गर्दछ। >> Biei टाउन को दक्षिण मा स्थित Furano टाउन Furano टाउन को आधिकारिक साइट को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस् आधिकारिक वेबसाइट मा दर्शनीय जानकारी प्रदान गर्दछ। >> फुरानो टाउन Shiretoko Shari-cho पर्यटक संघ Shiretoko Shari-cho पर्यटक संघ को आधिकारिक वेबसाइट को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस् पूर्वी Hokkaido मा प्रसिद्ध पर्यटन गन्तव्य Shiretoko को बारे मा विस्तृत पर्यटन जानकारी प्रदान गर्दछ। >> Shiretoko Shari-cho पर्यटक संघ Tohoku क्षेत्र सम्बन्धित वेबसाइट Sanriku रेलवे Sanriku रेलवे को आधिकारिक वेबसाइट को लागी क्लिक गर्नुहोस् Tohoku क्षेत्र को प्रशान्त तट को उत्तर र दक्षिण। यो क्षेत्र २०११ को ग्रेट इस्ट जापान भूकम्पले ध्वस्त पारेको थियो। जहाँसम्म, पछि, Sanriku रेलवे थियो ...
अब, अधिक र अधिक परिचय दिनुहोस्! t अर्को Chubu क्षेत्र (माउन्ट फुजी आदि) र Kansai क्षेत्र (त्यहाँ क्योटो, नारा, ओसाका आदि छन्!) सम्बन्धित साइटहरू छन्। कृपया प्रत्येक साइटमा अधिक जानकारी खोज्नुहोस्। सामग्रीको तालिका चुबु क्षेत्र सम्बन्धित वेबसाइट कन्साई क्षेत्र सम्बन्धित वेबसाइट चुबु क्षेत्र सम्बन्धित वेबसाइट MT। फुजी त्यहाँ एमटीका लागि तीन सिफारिश साइटहरू छन्। निम्नानुसार फुजी सबैभन्दा पहिले, यदि तपाईं माउन्टको शिखरमा चढ्न चाहनुहुन्छ भने। गर्मीमा फुजी, कृपया पहिले आधिकारिक वेबसाइटमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। अर्को, सामान्य पर्यटन को लागी, म दोस्रो साइट को सिफारिश। यो माउन्टको उत्तर तिर यमनाशी प्रान्तको आधिकारिक साइट हो। फुजी मलाई लाग्छ कि माउन्ट। फुजी उत्तरमा अहिले सबैभन्दा सुन्दर छ। वास्तवमा धेरै पर्यटकहरू उत्तरतर्फ जान्छन् जस्तै कावागुचिको। यदि तपाइँ माउन्टमा पुग्नुभयो भने दक्षिणबाट फुजी, कृपया शिजुओका प्रान्तको आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्, जुन मैले तल तेर्सो सूचीबद्ध गरें। >> माउन्ट फुजी आरोहणका लागि कृपया यस साइटलाई हेर्नुहोस् >> माउन्ट फुजीको उत्तरी पक्षमा जानकारीको लागि कृपया यस साइटको भ्रमण गर्नुहोस् >> माउन्ट फुजीको दक्षिणपट्टि जानकारीका लागि कृपया यस साइट नागोनो भ्रमण गर्नुहोस्। नागानो प्रान्तमा स्पटहरू जस्तै हाकुबा र मत्सुमोोटो, कृपया निम्न वेबसाइटमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। यो नागोनो प्रान्तको पर्यटन विभागको साइट हो। >> नागानो प्रान्तमा पर्यटक जानकारीका लागि कृपया यो साइट हेर्नुहोस् कजाजा कानाजावा शहर ईशिकावा प्रान्तमा जापानको सागरको छेउमा एउटा अद्भुत शहर हो जहाँ परम्परागत शहरहरू र संस्कृति ...
अर्को पश्चिमी जापानको सम्बन्धित साइटहरू छन्। यदि तपाईं हिरोशिमा, फुकुओका, ओकिनावा, आदि जाने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, निम्न साइटहरूले हामीलाई उपयोगी जानकारी बताउँदछन्। सामग्रीको तालिका चुगोको र शिकोको क्षेत्र सम्बन्धित वेबसाइट किशु क्षेत्र सम्बन्धित वेबसाइट ओकिनावा सम्बन्धित वेबसाइट चुगोको र शिकोको क्षेत्र सम्बन्धित वेबसाइट हिरोशिमा मियाजीमा टापु र हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम जस्ता पर्यटन स्थल सम्बन्धी सिफारिश गर्दछु, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु "यात्रा HIROSHIMA द्वारा संचालित" प्रिफेक्चर >> हिरोशिमा भ्रमण गर्नुहोस् सेतोची होन्शु र शिकोको बीचको सेतो इनल्याण्ड सागर शान्त छालहरूको साथ समुद्र हो। यो सानो टापुको साथ बिन्दु भएको छ र सुन्दर दृश्यहरू सिर्जना गर्दछ। सेतो इनल्यान्ड सागर र वरपरका क्षेत्रहरूलाई सामूहिक रूपमा "सेतोची" भनिएको छ। सेतोची को लागी, "सेतोची खोजक" ले जानकारीलाई विस्तृत रूपमा पोष्ट गर्छ। यो सेतोची पर्यटन प्राधिकरण, सेतुची (ह्योगो, ओकायामा, हीरोशिमा, यामागुची, टोकुशिमा, कागवा र एहिमेम) को सात प्रान्तहरू बीचको सहकार्यको माध्यमबाट व्यवस्थापन गरिएको छ। >> सेतोची खोजक यहाँ छ सान'इन चुगोकु क्षेत्रको उत्तरी भाग (पश्चिम होन्शुको जापानको सागर) सामूहिक रूपमा सान'इन वा सानिन भनेर चिनिन्छ। यो क्षेत्र Chugoku पहाड क्षेत्र द्वारा हिरोशिमा रूपमा दक्षिण मा प्रमुख शहरहरु बाट अलग छ। त्यसोभए, सान'इन क्षेत्र २० औं शताब्दीको पछि विकासको तुलनामा ढिलाइ भएको छ। त्यस कारणका लागि, एक आश्चर्यजनक सुन्दर पारम्परिक दुनिया बाँकी छ। सान'इनको सम्बन्धमा, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु यस क्षेत्रका नगरपालिकाहरूले सञ्चालित "डिसेभर सान'इन"। >> Discaver San'in यहाँ कुशु क्षेत्र सम्बन्धित वेबसाइट क्युशु क्युशुमा पर्यटन सम्बन्धी जानकारीको बारेमा छ, ...